Kuthulwe uncencence lweHyundai
LIKHULU ithemba lokuthi izokwenza kahle emakethe iHyundai Atos entsha ethulwe kuleli sonto.
Le moto ithulwa nje, isivele iqalile ukudayiswa njengoba ngenyanga edlule kudayiswe angu-244.
I-Atos iyimoto ekahle uma ufuna imoto encane nebiza inani elincane. Ibanga abathengi nezimoto okubalwa kuzo iDatsun Go neRenault Kwid.
Umqondisi wezokudayisa nokusebenza kwaHyundai Automotive South Africa, uStanley Anderson, uthe emuva kokuyivivinya isikhathi eside kuleli babone ukuthi inakho konke okungayenza iphumelele kulesi sigaba esinzima encintisana kuso.
Uthe babheke ukuthi lesi sigaba sikhule ngenxa yobunzima bomnotho.
I-Atos entsha inkulu kunendala futhi ivulekile. Kwadayiswa angu-45 092 kwamadala.
I-Atos ingena ngaphansi kweGrand i10 ngokwentengo nangokobukhulu. Uzokhumbula ukuthi kwaHyundai ibingasekho imoto encane ngemuva kokuhoxisa ukudayisa i-i10 baqhubeka neGrand i10 enkudlwana.
Ngaphansi kwebhonethi bayifake injini engu-1.1 litre. Inamandla angu-50kW ne-torque engu-99Nm.
Ngebanga lika-100km, bathi isebenzisa amalitha kaphethroli angu-100km.
Iyimoto ekahle yokuhamba edolobheni kodwa noma uthatha ibangana ayikhalisi.
Amandla ayo awezwakali ukuthi mancane futhi nasemabhampini, iyazama ukuba ntofontofo.
Izinto ephuma nazo kukhona i-7 inch touchscreen infotainment system eveza iselula nge-Apple CarPlay, isiteringi esinamabhathini okulawula umsakazo nokubamba iselula uma uyixhume ngeBluetooth, USB socket, air conditioner, amawindi kagesi ngaphambili, ama-airbag omshayeli nomgibeli ngaphambili namabhreki e-ABS.
Hyundai Atos R159 900
Iphuma ne-warranty yeminyaka eyisikhombisa noma * -200 000km, service plan yonyaka owodwa ne-roadside assistance yeminyaka eyisikhombisa noma * -150 000km. Kumele iye kwi-service ngemuva kokuhamba * -150 000km.